Hamoaka lahatsoratra amin’ny bilaogim-piarahamonina! · Global Voices teny Malagasy
Hamoaka lahatsoratra amin'ny bilaogim-piarahamonina!
Voadika ny 20 Jolay 2019 2:53 GMT
Raha te-hiditra amin'ity tranonkala ity ianao no sady handefa ny lahatsoratrao voalohany mandritra izany, dia ampiasao azafady ny taratasy etsy ambany mba handefasana ny lahatsoratrao sy ny sarinao voalohany. Raha vao tafavoaka izany, dia hahazo ny kaontinao manokana ianao: toy ny amin'ny tranokala GV hafa.
Inona ireo karazana lahatsoratra azonao alefa?
Ny bilaogin'ny vondrom-piarahamonina dia sehatra ho an'ireo mpandray anjara Global Voices mba hizara tantara momba ny fiainantsika, ny tranontsika, ny diantsika, ary ny fihaonana, mba hisaintsainana ny asantsika sy hizarana hevitra momba ny sehatra misy antsika. Mizara sary, fandinihana, tahotra na fanantenana, fiovana eo amin'ny fiainana. Mitantara momba ireo mpiara-miasa na namana, tetikasa na tantara mba hampivelatra ny fiainantsika. Manolotra hevitra ho an'ny tetikasa iombonana, manasa ny hafa hiresaka sy hifanakalo hevitra ary olana, eo amin'ny asa sy izao tontolo izao, na manomboka resaka fotsiny.
Raha sehatra ho an'ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonin'ny GV mba hifaneraserana, hilalaovana sy hanehoana hevitra ity tranonkala ity, dia hitan'ny daholo be ihany koa izany, mba hahalalan'izao tontolo izao ny olona ao ambadiky ny Global Voices, ary koa manatevin-daharana antsika amin'ny adihevitra sy fifanakalozan-kevitra ao amin'ny takelaka fanehoan-kevitra .
[gravityform id=”1″ name=”Submit a post”]